အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 12, 2013 တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 16, 2013 Douglas Karr
ဒါကတကယ့်နှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Dendrite ပန်းခြံ ငါပိုပြီးသဘောတူနိုင်ဘူးကြောင်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကသင့်တော်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ချဉ်းကပ်ပုံကိုတင်ပြပေးတယ် ကြီးထွားလာ ထိုအရပ်မှ!
ဤသည်မှာသင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ဉာဏ်ပညာသစ်ပင်ဖြစ်သည်။ ခိုင်မာသောအမြစ်များ (အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံ၊ SEO နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု) သည်သင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုယူဆောင်လာပြီးရောင်းအားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသောလူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများ (သရဖူ) ကိုသယ်ဆောင်ရန်စည် (သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်) ကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
Tags: analyticsအီးမေးလ်စျေးကွက်Facebook ကပုံစံများgoogle ပေါင်းဆင်းသက်စာမျက်နှာများခဲဖမ်းယူlinkedinဒေသတွင်းရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Webinarမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက်ပေးဆောင်ရှာဖွေရေးကလစ်နှိပ်နှုန်းပေးဆောင်Pinterestppcစာနယ်ဇင်းဖြန့်ချိတုံ့ပြန်မှုဆိုဒ်များရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseoပုံစံများကိုစာရင်းသွင်းပါလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာတွစ်တာyoutube က
1:2014 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 10
မင်္ဂလာပါဒေါက်ဂလပ်! Content Marketing သည်သင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သောအဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်၊ ထိုကဲ့သို့သောအသုံး ၀ င်သည့်မဟာဗျူဟာကိုသင့်တော်သောလူများထံမှသင်၏စီးပွားရေးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အစွမ်းထက်သောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!